DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA EPSON L350 - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Epson L350 ọkwọ ụgbọala na-adọkpụ.
Ọ dịghị ngwaọrụ ga-arụ ọrụ nke ọma n'enweghị ndị ọkwọ ụgbọala a họpụtara ahọpụta, na n'isiokwu a anyị kpebiri ileba anya iji wụnye software na ngwaọrụ Epson L350 multifunction.
Nbudata software maka Epson L350
Enweghị ụzọ ọ bụla ị ga-esi wụnye ngwanrọ dị mkpa maka onye nbipute Epson L350. N'okpuru ebe a bụ nchịkọta nke nhọrọ kachasị ewu ewu ma dị mfe, ma ị họrọlarị nke kachasị amasị gị.
Ịchọọ ngwanrọ maka ngwaọrụ ọ bụla na-amalite mgbe ọ bụla site na isi akwụkwọ, n'ihi na onye ọrụ ọ bụla na-akwado ngwaahịa ya ma nye ndị ọkwọ ụgbọala ohere.
Nke mbụ, gaa na nchịkọta Epson ọrụ na njikọ njikọ.
A ga-akpọrọ gị gaa na isi peeji nke ọnụ ụzọ. Lee, lee anya bọtịnụ n'elu. "Ndị ọkwọ ụgbọala na Nkwado" ma pịa ya.
Nzọụkwụ ọzọ bụ iji kọwaa ụdị ngwaọrụ ịkwesịrị iji bulie ngwanrọ ahụ. Ị nwere ike ime nke a n'ụzọ abụọ: dee ụdị ihe nbipute na mpaghara pụrụ iche, ma ọ bụ họrọ akụrụngwa site na iji menu ndọtị pụrụ iche. Ekem pịa "Chọọ".
Ohu ohuru ga egosiputa ihe nchoputa. Pịa na ngwaọrụ gị na listi.
A ga-egosipụta ibe nkwado ngwaike. Pịgharịa obere ala, chọta tab "Ndị ọkwọ ụgbọala na ọrụ" ma pịa ya iji lee ọdịnaya ya.
Na mpaghara ndọpụta, nke dị ntakịrị ala, dee os gị. Ozugbo ị na-eme nke a, ndepụta nke software a na-ebudata ga-apụta. Pịa bọtịnụ ahụ Download eme ihe ọ bụla iji malite ibudata ngwanrọ maka onye nbipute na nyocha, dịka ihe nlereanya na ajụjụ bụ ngwaọrụ multifunctional.
N'iji onye nyocha ngwa ngwa dịka ọmụmaatụ, ka anyị lelee otú e si arụnye ngwanrọ. Wepu ọdịnaya nke ebe nchekwa ahụ ebudatara n'ime nchekwa dị iche ma malite usoro ahụ site na ịpị ugboro abụọ na faịlụ nwụnye. A ga-emepe windo ebe ị ga-eme ka e tinye Epson L350 dịka onye nbipute na - enweghị ihe ọ bụla - nanị tinye akara igbe kwekọrọ ekwekọ ma ọ bụrụ na ị kwenyere, ma pịa "OK".
Ihe ọzọ ị ga - eme bụ ịhọrọ asụsụ nwụnye wee ọzọ hapụ pịa "OK".
Na windo nke gosipụtara, ị nwere ike inyocha nkwekọrịta ikike. Ịga n'ihu, họrọ ihe ahụ "Kwekọrịta" ma pịa bọtịnụ ahụ "OK".
N'ikpeazụ, na-echere usoro nhazi iji mezue ọkwọ ụgbọala maka nyocha ahụ n'otu ụzọ ahụ. Ugbu a ị nwere ike iji ngwaọrụ ahụ.
Usoro 2: Software niile
Tụlee usoro metụtara ntanetị nwere ike ibudata, bụ nke na-enyocha usoro ma na-egosipụta ngwaọrụ, nrụzi achọrọ ma ọ bụ mmelite ọkwọ ụgbọala. Usoro a dị oke iche site na ntụgharị ya: ị nwere ike iji ya mgbe ị na-achọ software maka ngwá ọrụ ọ bụla. Ọ bụrụ na ị maghị ngwá ọrụ software ịchọrọ iji chọọ software, anyị kwadebere isiokwu na-esonụ karịsịa maka gị:
Maka akụkụ nke anyị, anyị na-akwado ka ị ṅaa ntị na otu n'ime usoro ndị a maara nke ọma ma dị mfe nke a - DriverPack Solution. Site n'enyemaka ya, ịnwere ike ibudata ngwanrọ maka ngwaọrụ ọ bụla, ma ọ bụrụ na ọ bụ njehie a na-atụghị anya ya, ị ga-enwe ike ịmeghachite usoro ma laghachi ihe niile dị ka ọ dị tupu ị gbanwee usoro. Anyị bipụtara otu nkuzi na ịrụ ọrụ a na weebụsaịtị anyị, nke mere na ọ ga-adịrị gị mfe ịmalite ịrụ ọrụ na ya:
Usoro 3: Jiri ID
Ngwa ọ bụla nwere nọmba nchọpụta pụrụ iche, jiri nke ị nwere ike ịchọta ngwanrọ. A na akwadoro usoro a iji mee ihe ma ọ bụrụ na abụọ ahụ dị elu adịghị enyere aka. Ị nwere ike ịchọta ID na "Onye njikwa ngwaọrụ"naanị na-amụ "Njirimara" onye nbiputa. Ma ọ bụ ị nwere ike ịme otu n'ime ụkpụrụ ndị anyị họọrọ maka gị n'ọdịnihu:
Kedu ihe ị ga-eme ugbu a na uru a? Nanị tinye ya na saịtị ọchụchọ na saịtị pụrụ iche nke nwere ike ịchọta ngwanrọ maka ngwaọrụ site na ID ya. E nwere ọtụtụ ihe ndị dị otú ahụ na nsogbu ekwesịghị ibili. Ọzọkwa, maka nkwekọrịta gị, anyị ebipụtawo ihe mmụta zuru ezu banyere isiokwu a obere oge gara aga:
Usoro 4: Ogwe njikwa
N'ikpeazụ, ụzọ ikpeazụ - ị nwere ike imelite onye ọkwọ ụgbọ ahụ n'enweghị ihe ọ bụla nke atọ - naanị iji ya "Ogwe njikwa". A na - ejikarị nhọrọ a mee ihe dị ka nkwụsịtụ nwa oge mgbe enweghi ike itinye software ahụ n'ụzọ ọzọ. Tụlee otú e si eme nke a.
Iji malite gaa "Ogwe njikwa" usoro kachasị mma maka gị.
Lee ebe a na ngalaba. "Akụrụngwa na ụda" isi "Lee ngwaọrụ na ndị na-ebi akwụkwọ". Pịa ya.
Ọ bụrụ na n'ime ndepụta nke ndị nbipute ama amaala ị gaghị achọta nke gị, wee pịa akara "Na-agbakwụnye onye nbipute" n'elu taabụ. Ma ọ bụghị ya, nke a pụtara na ọ bụrụ na ndị ọkwọ ụgbọala niile dị mkpa ma ị nwere ike iji ngwaọrụ ahụ.
Nchọpụta kọmpụta ga-amalite na ngwunye ngwaike nke ị nwere ike iwunye ma ọ bụ kwalite ngwanrọ ga-amata. Ozugbo ị hụrụ onye nbipute gị na listi - Epson L350 - pịa ya na mgbe ahụ na bọtịnụ ahụ "Na-esote" ịmalite ntinye nke software dị mkpa. Ọ bụrụ na akụrụngwa gị apụtaghị na listi ahụ, chọta akara na ala nke windo ahụ "E depụtaghị ihe nbipute achọrọ" ma pịa ya.
Na windo nke na-egosi ka ịgbakwunye onye nbipute mpaghara ọhụrụ, lelee ihe kwesịrị ekwesị ma pịa bọtịnụ ahụ "Na-esote".
Ugbu a site na menu ndapụta, họrọ ọdụ ụgbọ mmiri nke ejiri ngwaọrụ ahụ jikọọ (ọ bụrụ na ọ dị mkpa, mepụta ọpụpụ ọhụrụ na aka).
N'ikpeazụ, anyị kwupụtara MFP anyị. N'akụkụ aka ekpe nke ihuenyo ahụ, họrọ onye nrụpụta - Epsonna nke ọzọ ederede ihe nlereanya - Epson L350. Gaa na nhazi nke ọzọ iji bọtịnụ "Na-esote".
Nzọụkwụ ikpeazụ - tinye aha nke ngwaọrụ wee pịa "Na-esote".
Ya mere, itinye software maka Epson L350 MFPs dị mfe. Ihe niile ị chọrọ bụ njikọ Ịntanetị na nlebara anya. Usoro nke ọ bụla anyị tụlere dị irè n'ụzọ nke ya ma nwee uru nke ya. Anyị nwere olileanya na anyị jisiri ike nyere gị aka.